Momba ny LinuxCapable - LinuxCapable
LinuxCapable.com dia natokana amin'ny famoahana Linux howtos, toro-hevitra ary fampianarana momba ny fizarana Linux isan-karazany miaraka amin'ny fifantohana mafy amin'ny rindrambaiko web sy server. Ny lohahevitra ohatra voarakitra dia fitaovana loharano misokatra, virtoaly, fitantanana rafitra, sy ny maro hafa.
LinuxCapable dia noforonin'i Joshua James tamin'ny Jolay 2021 ary mbola vaovao ary mbola mahita ny toerany miaraka amin'ny endrika sy ny endri-javatra saingy manomboka mitombo ary antenaina fa ho fanilo ho an'ny mpampiasa ho avy amin'ny fitadiavana fampahalalana mahasoa sy fanampiana momba ny fampianarana apetraka.
Ny antony lehibe namoronana ny tranokala dia ny maro amin'ireo howtos sy fampianarana mifantoka indrindra amin'ny sysadmin na mpampiasa herinaratra. LinuxCapable.com dia natao hitazomana hatrany ireo mpampiasa Linux na mpampiasa mpanelanelana izay mila fampahalalana bebe kokoa. Tranonkala fampianarana maro no mitovy, fa tsy milaza fa ratsy na diso izany. Raha ny marina, maro no mahafinaritra. Na izany aza, LinuxCapable dia manandrana manazava zavatra kely kokoa, miaraka amin'ny fampahalalana bebe kokoa sy safidy hafa mba hanantena fa hanome hevitra ny mpampiasa vaovao fa tsy mila manaraka an'io lalana io ihany ianao raha azo atao.
Amin'ny ankapobeny, ny tanjona fototra amin'ny tranokala dia ny hitondra fampianarana tsy tapaka mba handrakofana lohahevitra maro araka izay azo atao, ary amin'ny ho avy dia mety hivelatra arakaraka ny fotoanan'ny tompony. Raha te hifandray mivantana amin'ny LinuxCapable ianao dia tsidiho ny anay Pejy mifandray aminay.